Ogow wax uurqaadida qalabkan 3D daabacan - Shiinaha Cixi Lanbo Daabacaadda
Ogow wax uurqaadida qalabkan 3D daabacay
macaamiisha iyo saaxiibo badan oo i weydiiso haddii uurqaadida waa caag? Halkan waa hadal adag oo ku saabsan waxa ay tahay uurqaadida maanta.
Uurqaadida waa soo gaabiyay Ingiriisi ah ee acid polylactic, kaas oo ku qoran sida: polylacticacid. Polylactic acid (uurqaadida) waa sheeko a biobased iyo wax baaba'aysa ka qalab istaarijka ceeriin soo jeediyay khayraadka dhirta la cusboonaysiin karo sida hadhuudh sameeyey. wax cayriin noqde waxaa laga heli by saccharification si ay u helaan glucose, ka dibna sonkorta iyo cadaadis gaar ah waxaa si cajiib leh in ay soo saaraan-khayroon daahirnimo sare jėrto, ka dibna qaar ka mid ah miisaanka kelli polylactic acid uu ku dhexsameeysmo by Avv kiimikada. Waxay leedahay biodegradability wanaagsan. Ka dib markii la isticmaalo, waxaa lagu gebi ahaanba Dullaysane karo by sheyga ee dabiiciga ah xaaladaha qaarkood, iyo ugu dambeyntii soo saarta carbon dioxide iyo biyo, oo aan nijaas deegaanka. Tani waa mid aad waxtar u leh deegaanka iyo la aqoonsan yahay sida wax bay'adda.
Warbixinta ayaa soo gabagabeeyey in natiijada hogaanka, mercury, cadmium, chromium, biphenyl, iyo Ceter diphenyl ahaayeen waafaqsan 11-ka sanno ee dardaaranka EU on isticmaalka walxaha xaddidan, iyo natiijooyinka muunad 001 aan la ogaan. ND waa Aan dected.
Oo dhan sahan kor ku xusan ayaa muujinaya in uurqaadida waa wax wanaagsan, laakiin ammaanka cuntada runtii waa arrin walaac weyn in qof kasta, ama noqon kuwa dhawrsada.
Bal i sii daa hadlaan qaar ka qabto dhaliilahaas iyo khataraha qarsoon oo uurqaadida. First of dhan, uurqaadida ma aha mid u adkaysata heerkulka sare, iyo waxa ay asal ahaan uu bilaabo inuu deform ilaa 60 °. Sida caaryada oo cunto ah, waa in qabow loola dhaqmo; wax uurqaadida la Dullaysane karo, taas oo ah faa'iido iyo khasaaro ah. In kasta oo ay tahay bay'adda u fiican, waxay u baahan tahay daabacaadda 3D ah ee wax soo saarka-fasalka. Raagaya waa guddiga gaaban; in geeddi-socodka daabacaadda, maxaa yeelay, waa xaabo-heerkulka sare, waxa ilaalin doona qayb ka ah, in kasta oo qayb ka ah isu yihiin non-sun ah, laakiin tani waa wax yar sida PM2.5, neefsashada oo muddo dheer ama qaar ka mid ah dhaawaca ku sambabada aadanaha, Sidaa darteed, meel daabacaadda 3D la doorbidayo hawo.
Sidaa darteed, waa wax uurqaadida ah bay'adda u fiican in qof kasta u isticmaali kartaa si kalsooni leh.
artifact dumpling caajis
Ugu dambeyntii qaylo dhigyo, technology nolosha, daabacaadda 3D ka riyooyin badala si dhab!